Izimbali - imfanelo ebalulekile yokugqoka izingubo zomshado zomakoti nomkhwenyana. I-boutonniere kanye nezimbali zomlobokazi zihlala ziqhutshwa ngesitayela esifanayo, kugcizelela ukuthi laba ababili basebenzela iqembu elivumelanayo.
Imizamo engaphambi komshado ithatha umzamo omkhulu, isikhathi futhi, kubalulekile, imali. Nokho, uma ufuna, unganciphisa izindleko. Isibonelo, isiqephu somlobokazi ngezandla zakhe ukwakha kalula, futhi lokhu kuvela ku-1500 kuya ku-5000 ama-ruble ayizinkulungwane.
Ungakhathazeki ngokuthi indalo yakho ngeke ibe ephelele njengabaflorisi. Akungabazeki ukuthi othile uzobukeka ngesigqila somlobokazi ngaphansi kwe-microscope. Uma ucabanga ukuthi awunakho ukucabanga, sebenzisa umqondo womunye umuntu. Akudingekile ukuba silwele ngokungafani ncamashi, imininingwane eminingi ingashintshashintsha, futhi uma ukubunjwa kufinyelela kakhudlwana, akukho lutho lokukhathazeka ngalo.
Ngakho-ke, uma wanquma ukwenza umlobokazi ngezandla zakho siqu, kuzodingeka uzijwayeze ngezinto eziyisisekelo ze-floristry. Umsebenzi wakho oyinhloko ukugcina ubuhle bezimbali isikhathi eside kakhulu. Kukhona izitshalo eziphatha kahle ngaphandle kokuswakama amahora ambalwa ngokulandelana: ama-orchid, indwangu, ama-daisies, amakhamera, izinkambu zamasimu namaflowflow. Ungakha ukwakheka kwazo, khona-ke izimbali zakho ngeke zidingeke amanzi. Uma kungenjalo kunconywa ukuthi usebenzise umenzi we-portquette.
Ngaphandle le divayisi ifana nemakrofoni enesibambo, ngaphakathi ngaphakathi efihliwe isiponji esivuthayo. Ukuba khona kwe-portuquette ngeke kugcine kuphela ukubonakala kwesikhwama somshado, kodwa futhi kuzosiza kakhulu inqubo yendalo yayo. Uma uhlulekile ukuthola lo mkhiqizo ekuthengisweni (Ngizobe ngithembekile, akulula ngaso sonke isikhathi ukwenza), kungashintshwa. Indima ye-portuquette izodlala noma yikuphi amandla okwehla. Ngezikhathi zokwehluleka okuphelele kumagazini othi "Rigas moda" ngisusa iseluleko somuntu obala izimbali oye wancoma ukusebenzisa i-tube test test yamakhemikhali njengomsele wamanzi . Ngendlela, banevolumu ehlukene nobubanzi. Izimpahla zamakhemikhali ngokuvamile zidayiswa ezitolo zezokwelapha.
Ukuze wenze umlobokazi ngezandla zakho siqu, uzodinga: isiponji nocingo, i-cuff, i-tape-tape, izesekeli. Konke lokhu kungathengwa ezitolo zezimbali neminyango ethengisa izinto ezincane ezinjenge-braid, izibhande, ubuhlalu nezinye izinto.
Okulandelayo, udinga ukucacisa ukuma nobukhulu be-bouquet. Ukubunjwa okuncane kubheka okuhle ezandleni zomakoti omncane, omncane. Kumantombazane akhula kakhulu, abanikazi bezintandokazi bancoma ukuthi izimbali zisetshenziswe. Izinduna ezinamafomu ezinzima kufanele ziqaphele izingqungquthela ezilinganiselwe zobukhulu obuphakathi noma obukhulu.
Vele uqaphele ukuthi ezinye ze-bouquets ngokwazo ukudala wena akunakwenzeka ukuphumelela. Ngaphandle kokuphela kokuqedwa kwezifundo zabaflorisi noma emva kokuqeqesha okude. Ngakho-ke ngincoma ukuthi uyeke ukukhetha kumafomu e-classical: i-sphere kanye nokudonsa. Esikhathini sokuqala, zonke izitshalo ziyanqunywa ukuze zilingane nobukhulu obufanayo. Qala ukubunjwa kokubunjwa kusuka emaphethelweni, ukuthuthela esikhungweni sokuvunguza. Njengoba wazi, kulula kakhulu ukwenza lokhu kumenzi we-portquette.
Ukwakhiwa ngendlela yokwehla kuyinkimbinkimbi kakhulu futhi kudinga ukhetho olubuhlungu lwezingxenye. Uzodinga izimbali "ezahlukene zokuvuthwa", ubeke nje - uhlume, uhhafu-uvaliwe futhi ufihlekile. Qala ukubhala isiqephu esivela phakathi nendawo, kusukela esitshalweni esikhulu kunazo zonke, uhamba ngokushelela ukuya ezincane ezincane. Ngenxa yalokho, ukuma okumele kubonwe kufane kufane nokudonsa okuphikisiwe.
Ngezigaba eziyinhloko zenqubo, indlela yokwenza umlobokazi womakoti ngezandla zakho, usuvele ujwayele. Manje ake sikhulume ngokuthi iziphi izimbali ezizozikhethela umkhosi obalulekile womshado. Ngokwesiko, izimbali zomshado zakhiwa ngama- roses amhlophe namhlophe . Kodwa namuhla imikhuba yefriji yefriji yezinto ezihlukahlukene kakhulu ukuthi ungasebenzisa lezo zitshalo ozithandayo.
Kodwa-ke, kunezimbali, ezikhona ezihlotsheni zomshado ezingathandeki.
Okokuqala, lokhu kubhekisela emthunzini - ophuzi bekulokhu kubhekwa njengombala wokuhlukaniswa.
I-roses ebomvu ayinikezwa umshado, futhi ngisho nangaphezulu ngakho-ke ayiphumelelanga emcimbini womlobokazi.
Qaphela ukuthi iminduze neminduze yesigodi ayihambisani nanoma yimuphi omunye umbala, ngakho-ke uma ubhala ukwakheka kubo, ke kuphela ku-mono-ehlukile.
Indaba yokwenza isixha somshado ingaphelele ngaphandle kokusho izesekeli. Ngokwemvelo, uzozikhethela ngokuvumelana nohlelo jikelele. Ubuhlalu, ama-sequin, ama-ribboni kanye neminsalo akungabazeki ukuhlobisa isixha, kodwa omunye akufanele akhohlwe ngomqondo wokulinganisa futhi. Kulesi simo, iseluleko seCoco Chanel sifaneleka kakhulu: "Into evame ukubonakala ingabonakali yilapho ebamba iso kuqala."
Imishado yaseCherchen - amasiko namasiko
Yenza isikhathi sezinyosi singenakulibaleka
Isihlibhi - esifuze noma umkhuba imfashini?
Bonisa nge osteochondrosis wesibeletho ukusiza ekudambiseni izinhlungu
"Ndodakazi Lobaba" Nastya Sivaeva - empilweni yakho kanye biography
Umzimba endlebeni yomuntu: ukwakheka kwazo, imisebenzi kanye nobungako obungafani empilweni social
Qamba Meaning, ignat. Imfihlakalo, umlando kanye umsuka igama ignat